सौका समुदायले देउसी भैली खेलि गबला पर्व मनाउदै ।।
आज : २०७५ फाल्गुण ४ शनिबार
स्टुडियो टाईम : ०६:४४
उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि दार्चुलाका धिरेन्द्र ग्राण्डी अस्पतालमा बन्धक,, घाइते धिरेन्द्रको पछाडीको भाग कुहिदै ।।
महाकालीका सात सडक निर्माणका लागि अडाई करोड बजेट ।।
शैल्यशिखर नगरप्रमुखले गरे प्रहरीलाई टिभि हस्तान्तरण ।।
वडा कार्यालय भवनमा बर्थिङ सेन्टर उद्घाटन ।।
कांग्रेसद्धारा सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन,, प्रदर्शनमा आधा दर्जन जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता ।।
२०७५ माघ ७ सोमबार ०६:४४
सौका समुदायको सबै भन्दा ठुलो पर्व गबला पर्व आज मनाईदै छ । हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने सौका समुदायको सबै भन्दा ठुलो पर्व गबला पर्व आज मनाउन लागिएको हो ।
दार्चुला जिल्लामा मात्रै बासोबास रहेको सौका समुदायले मनाउने गबला पर्व हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाउने चलन छ । सौका समुदायको पनि व्याँसी सौकाहरुले बढी उत्साहका साथ मनाउने गरेको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ शोभा तिंकरीले बताए ।
सौका समुदायमा गबला देवताको पूजाआजा अर्थात् गबला पर्व मनाएपश्चात् मात्रै विबाह ब्रतबन्ध जस्ता शुभकार्य गर्ने परम्परा रहेको व्याँसकै अर्का स्थानीय सोनिका तिंकरीले बताए । गबला पर्ब मनाउनु पूर्व साइत जुराएर धच्र्यु चुमो गर्ने परम्परा रहेको छ । सौका समुदायको भाषामा धच्र्यू चुमो भनेको बाँसको लिंगोमा ध्वाजा लगाएर घरघरमा ठड्याउने गरिन्छ अर्थात् स्थापना गर्ने परम्परा रहेको छ ।
व्याँसी सौका समुदायको ठूलो पर्वका रुपमा मनाइने गबला पर्वको अर्काे मूख्य विशेषता माघ महिनामा देउशी भैलो खेल्ने प्रचलन छ । सौका समुदायले गबला पर्वको अवसरमा देउसी भैलो खेल्ने चलन रहेको छ । हिन्दु धर्मालम्बीहरुका अन्य समुदायमा कात्र्तिक महिनामा तिहारका बेला दिपावलीका अबसरमा खेल्ने देउसी भैलो सौका समुदायले गबला पर्बका अबसरमा खेल्ने गरेका छन् । गबला पर्वका अबसरमा इष्टमित्रहरुबीच भेटघाँट गर्ने चलन छ ।
आक्रान्त बनाउदै चलचित्र निर्देशक प्रमोद !
काठमाडौं । यस अधि नै चलचित्र निर्देशनमा निरन्तर सक्रिय रहेका प्रमोद भण्डारीले अब ‘आक्रन्त’ नामक चलचित्रको निर्माण तथा निर्देशन गर्ने भएका छन् ।
गोल्डेन ग्लोब अवार्ड २०१८ : कुन बिधामा कसले जिते अवार्ड ?
काठमाडौं, गोल्डेन ग्लोब अवार्ड २०१८ मा थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिङ, मिजोरीले सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड जितेको छ । यो चलचित्रले समग्रमा
‘सुपर मोडल नेपाल–२०१८’
काठमाडौं, ‘द सुपर मोडल नेपाल–२०१८’ बन्न ४७ जना मोडलहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्यासिफिक इभेन्ट एण्ड मेनेजमेन्टद्वारा आयोजित
लोकप्रिय गायक रञ्जित लामाका नयाँ गीत बजारमा
काठमाडौं । लोकप्रिय गायक रञ्जित लामाको ‘आउन माया आउ’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो यसै साता सार्वजनिक भएको छ । विगत पाँच वर्ष संगीत क्षेत्रमा
क्रिकेटमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेको नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कदै ।।
६० लाखमा शुन्य प्रगति भएको सडक निर्माणमा २५ लाख बजेट ।।
दार्चुलाका चार सडकखण्ड कालोपत्रे र धन्थलामा पुल निर्माण गरिने,, बहुवर्षिय ठेक्का मार्फत् काम अगाडी बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन ।।
दार्चुलामा पुनः हिउँदे वर्षासंगै हिमपात, महाकाली लोकमार्ग अबरुद्ध ।।
नोटिफाइड एरिया कायम गर्न माग गर्दै धारचुलमा प्रर्दशन, सीमा पुलमा केही समय आवत् जावतमै रोक ।।